Awoodda: Cunsuriga maqan ee xeeladaha ugu badan | Martech Zone
Awoodda: Cunsuriga Maqnaa ee Xeeladaha Mawduuca badankood
Isniin, April 4, 2016 Tuesday, April 5, 2016 Douglas Karr
Ma jiro toddobaad soconaya Martech Zone in aynaan daaweyneynin oo aan la wadaageyno xaqiiqooyinka dadka kale, ra'yigooda, xigashooyinka, iyo xitaa waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyadoo loo marayo qaab qoraal iyo daabacado kale.
Annagu ma nihin goob wax lagu qoro oo loogu talagalay waxyaabaha dadka kale ka kooban yihiin, in kastoo. La wadaagida fikradaha dadka kale kaaama dhigeyso maamul, waxay aqoonsan tahay oo xoojineysaa awooda qoraaga. Laakiin… wanaajinta, ka faallaynta, dhaleecaynta, tusaalaynta iyo sharraxaadda waxyaabaha kale ee dadka kale ma aha oo keliya inay aqoonsanayso oo ay xoojineyso awooddooda… sidoo kale waxay kobcinaysaa taada
Markii aan ka helo waxyaabo khadka tooska ah uga faa'iideysanaya dhagaystayaasheena, waxaan waqti u qaataa si taxaddar leh u falanqeynaya oo u bixiya faahfaahin aan ogahay in dhagaystayaashaydu ay qadarin doonaan. Kuma filna, tusaale ahaan, in la daabaco sawir-gacmeed uu qof kale hindisay. Waxaan u baahanahay inaan la wadaago faahfaahintaas oo aan bixiyo falanqeyn dhammaystiran oo ku saabsan taas oo ah mid gaar ah iyo jagooyin my khibrad
Waa maxay Awooddu?
Qeexid: Tayada kalsoonida leh ee qof wax badan ka og wax ama ay ixtiraamaan ama adeecaan dad kale.
Qeexitaankaas, waxaa jira saddex shuruudood oo loogu talagalay maamulka:
Khabiir - qofka waxbadan og oo banaanka soo dhiga ay aqoon.
Kalsoonida - qofka rumeysan ay aqoonta markay wadaagaan.
Aqoonsiga - khabiiro kale oo xusaya khibrada uu qofku si kalsooni leh u muujiyo.
Dib u cusbooneysiinta fikradaha asalka ah ee dadka kale weligood kaa dhigi maayaan maamul. In kasta oo laga yaabo inay muujiso inaad xoogaa khibrad leedahay, haddana wax fikrad ah kama bixinayso kalsoonidaada. Sidoo kale ma noqon doonto mid ay ku aqoonsadaan asxaabtaadu.
Awooddu waxay muhiim u tahay safarka macaamiisha maxaa yeelay macaamiisha iyo ganacsatadu waxay raadinayaan khibrad si ay uga caawiyaan una ogeysiiyaan go'aanka ay ku iibsanayaan. Si fudud haddii loo dhigo, haddii aad soo xiganayso qof kale, iibsaduhu wuxuu u eegi doonaa asalka asalka ah maamulka la aqoonsan yahay - adigu maahan.
Haddii aad rabto in lagugu aqoonsado maamul, noqo maamulka. Ma sameynaysid taas adoo istaagaya fikradaha dadka kale. Muuji aragtidaada gaarka ah. Tijaabi oo ku taageer fikradahaaga cilmi baaris iyo dukumiintiyo. Kadib wadaag fikradahaas dhammaan qaybaha warshadaha kuu oggolaanaya inaad kaqeybqaadato. Daabici kastaa wuxuu had iyo jeer raadiyaa aragtida gaarka ah - waa jawi fudud.
Natiijada wadaagista khibradaada ayaa ah inaad hada la simantahay asxaabta hormoodka ka ah mihnadaada, oo aan lagaa indha tiri doonin markaad gadaashooda taagan tahay. Markaad dhisto aqoonsi oo aad si kalsooni leh u wadaagto khibradaada, waxaad ogaan doontaa in lagu aamini doono laganaula dhaqmi doono si ka duwan sidii hore. Asxaabtaada ayaa ku aqoonsan doona oo kula wadaagi doona tallada aad siineyso.
Oo markii laguu arko inaad tahay hay'ad, saameyn ku yeelashada go'aanka iibsiga ayaa noqda mid aad u fudud.
Tags: xujokalsooniSafarka macaamiishaqeexitaanka maamulkakhibradardaydaaqoonsi
Waa Maxay Qalabaynta Suuqgeynta? Maxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato…
Muxuu "Suuqgeynta Salka ku Haya" dhab ahaantii uga jeedaa?